यो हो विश्वकै सानो फोन - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
Homeसमाचारपरदेशमासीप/श्रमविचार/ब्लगअन्तर्वार्ताफलैंचाहराएका परदेशीजान्नैपर्ने कुरास्रोत सामग्री— Contact— Advertising-us— question— advertisementहाम्रो बारेमा
यो हो विश्वकै सानो फोन
काठमाडौं- भारतमा विश्वकै सानो जीएसएम फोन सार्वजनिक भएको छ । रुसी कम्पनी इलारीले यो फोन विश्वकै सानो जीएसएम फोन भएको दावी गरेको छ । यो फोन वेबसाइटबाट किन्न सकिन्छ । यसको मूल्य २ हजार ९ सय ९९ भारतीय रुपैयाँ पर्छ । यो फोन प्लाटिनम सिल्भर, रोज गोल्ड तथा ब्ल्याक रङमा उपलव्ध छ ।
यो फोनको नाम नानो फोन सी हो । यसको बडी आल्मुनियमबाट बनेको छ भने बोर्ड सिलिकनको छ । कम्पनीले यो भन्दा पहिले पनि यस किसिमको फोन सार्वजनिक गरेको थियो । यो फोनमा ब्लूटूथ सपोर्टका साथसाथै कल रिकर्ड गर्ने व्यवस्था पनि छ । यसमा म्याजिक भ्वाइस फंसनको व्यवस्था गरिएको छ । जसका माध्यमबाट आवाज बदल्न सकिन्छ । यो फोनमा १ हजार कन्ट्याक्ट स्टोरको व्यवस्था गरिएको छ ।
नानो फोन सीमा १ इन्चको टीएफटी डिस्प्ले राखिएको छ । फोनमा मिडिया टेक एमटी ६२६१ डी प्रोसेसर राखिएको छ । फोनमा ३२ एमबीको ¥याम छ । यसको इन्टरनल मेमारी पनि ३२ एमबीको छ । माइक्रो एसडी कार्डको माध्यमबाट यसलाई बढाएर ३२ जीबी सम्म पु¥याउन सकिन्छ । यसको ब्याट्रि २८० एमएएचको छ । यो क्षमताको ब्याट्रिले ४ घन्टाको टकटाइम दिन्छ ।
गोकर्ण विष्ट हटाएकोमा खुशी मनाउँदै मलेसियाली कम्पनी बेष्टिनेट !
क्वालालम्पुर, मंसिर २७- नेपालका श्रम मन्त्री फेरिनुले मलेसियाको कुनै कम्पनीलाई के फरक पार्ला ? त्यसमा खुशी वा दुःखी हुनुपर्ने कुनै कारण...
नेपाली कामदार लिन लाग्ने खर्च रोजगारदाताले तिर्नुपर्दछ : मलेसिया
क्वालालम्पुर, मंसिर २६- नेपालबाट कामदार लिन मलेसियाले निश्पक्ष भर्ना प्रकृया अपनाएको यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले एक नेपाली...
बैकहरुलाई राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनः सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुनु
काठमाडौं, मंसिर २५- नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तिय...
कुवेतमा हराए एक नेपाली
रञ्जना लम्साल, नवलपरासी- उनी हुन् केशवराज मश्राङ्गी मगर । बैदीकाली गाउँपालिका ३ घर भएका उनी गएको कात्तिक २७ गते बैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत उडेका हुन्...
उनलाई मलेसियामा कहिं देख्नु भएको छ की ?
रञ्जना लम्साल, कावासोती, भदौ ४- श्यामलाल सुनार कमाउन मलेशिया पसेको दुई बर्ष भयो । बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ३ का...
श्रीमान परदेशमा बेखवर भएपछि रामकुमारीलाई घर चलाउनै समस्या
काठमाडौं, सर्लाहीको गौरीशंकरका रामबाबु महतो कमाउन १० बर्षअघि मलेसिया गएका छन् । तर उनी दुईबर्ष यता परिवारको सम्पर्कमा छैनन् । घरमा...
सम्पर्क नंः ९८४१६१७७४१
सम्पादक: सुनिल न्यौपाने
सम्वाददाताः सौगात मिश्र